UPDATE: Xasan Cali Kheyre oo si deg-deg ah dib ugu soo noqday Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Xasan Cali Kheyre oo si deg-deg ah dib ugu soo noqday...
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’isul wasaarihii Xukuumadda, Xasan Cali Kheyre oo Sabtidii maanta Baarlamaanka Soomaaliya uu kalsoonida kala laabtay ayaa goordhow soo gaaray magaalada Muqdisho, kadib markii uu kasoo ambaxay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa safarkiisa ku wehlinaya tiro Xildhibaanno iyo Wasiir ka tirsanaa xukuumaddiisa.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa loo galbiyay Xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya, halkaas oo uu warbaahinta kula hadli doono.
Kheyre ayaa lagu waddaa in uu ka hadlo go’aankiisa ku aadan kalsooni kala noqoshadda Golaha shacabka ee BF Soomaaliya.
Kala soco marwalba wararkii ugu dambeeyay Halqaran.com
dib ugu soo noqday